ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ``ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ အတူ….ပျံ ´´ By "ဘုန်းဦးမော် "
``ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ အတူ….ပျံ ´´ By "ဘုန်းဦးမော် "
ဦးတည် ပျံသန်းရာ အရပ်ဆီကို လှမ်းမြင်မနေရ ပေမယ့် အဲဒီဒေသရဲ့ ကြေကွဲဖွယ် အနိဌာရုံ မြင်ကွင်း တွေက ကျွန်တော်ရဲ့  အတွေး ကားချပ်ထဲမှာ ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကား ပြနေ သလို တဖျပ်ဖျပ် နဲ့ ပေါ်လာနေတယ် ။ (အာဖဂန်နစ္စတန် ရဲ့  မြို့တော်ကဘူးလ် ) အတွေး ပုံရိပ် မျိုးစုံ က အဆက်အစပ်မဲ့ ပြောင်းလဲ လှုပ်ရှား နေပေမယ့် ပြ ကွက် အားလုံးရဲ့  တစ်ခုတည်း သော တူညီချက် ကတော့ သွေး နဲ့ မျက်ရည်တွေ ။ပွေ့ဖက်မှု တစ်ခု ကို မတောင့်တ ဖူးတဲ့သူ ဘယ်သူ ရှိမလဲ ဒါပေမယ့် ကဘူးလ်မြို့ ထဲမှာ ကင်းလှည့် နေရတဲ့ စစ်သားတွေ ကတော့ ဘယ်နေရာ ကနေ ထွက်လာ မယ်မှန်း မသိတဲ့ သက်ရှိ မိုင်းဗုံးတွေ ရဲ့ ပွေ့ဖက်မှု တွေကို တွေးကြောက် နေရတယ် ။ ကို်ယ့်နိုင်ငံ ထဲမှာ ကိုယ့် မိသားစု နဲ့ အတူ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ဆင်နွဲနေတဲ့ အချိန် ဘယ်သူတွေ မပျော်ပဲ နေကြမလဲ ။ ဒါပေမယ့် ကဘူးလ် မြို့ တစ်နေရာ က လူမစုံတဲ့ မိသားစု အင်္ဂါ မစုံတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ ပွဲတော် တွေကို အထိတ်တလန့် ကျော်ဖြတ် နေကြ ရတယ် ။ ဦးတည် ရာ လမ်းကြောင်း ကနေ တိမ်းစောင်း မသွား ရအောင် လေယာဉ်ကို အသာအယာ ထိန်းမောင်း နေရင်း ကျွန်တော့် ရဲ့  နှုတ်ခမ်းတွေ မသိမသာ တွန့်ကွေး သွားတယ် ။ အခု ကျွန်တော် ဘီ-၁၅၀ ဗုံးကြဲ လေယာဉ် ကြီးကို ကဘူးလ် မြို့ ဆီ ဦးတည် မောင်းနှင် နေရပြန်ပြီ ။ ကျွန်တော်ရဲ့  ဘယ်ညာ နှစ်ဖက် နဲ့ အနောက် ခပ်စောင်းစောင်း ဆီကနေ ကပ်ပါ ပျံသန်း လာကြတဲ့ အမျိုးအစားတူ လေယာဉ်ကြီး လေးစင်း ကိုငဲ့စောင်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ အဲဒီ လေယာဉ်ကြီး တွေပေါ်က လေယာဉ်မှူးတွေကရော ဘာတွေများ တွေးနေကြမလဲ။ သိပ်မကြာခင် အချိန်လေး မှာ လုပ်ရ တော့မယ့် ကျွန်တော် တို့ရဲ့  လုပ်ရပ်ဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့  အနာဂတ်အတွက် တစ်ပိုင်း တစ်စသော ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ယူဆောင် ပေးနိုင် လိမ့်မလား ဆိုတာ မသေချာ ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မောင်းနှင် ပျံသန်း လာတဲ့ ဗုံးကျဲလေယာဉ်ကြီး ငါးစင်း ကတော့ ကဘူးလ်မြို့ နဲ့ နီးသတက်နီးလာပါပြီ ။
ဒီစီမံကိန်းရဲ့  နာမည်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး( PEACE ) လို့အမည်ပေးထားတယ် ။ မြေပြင်က နေသာ ကောင်းကင်ကို မော့ ကြည့်မယ် ဆိုရင် တစ်စင်းစီရဲ့ ၀မ်းဗိုက်မှာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ တစ်လုံးစီကို ရေးထိုးထားတဲ့ လေယာဉ်ကြီး ငါးစင်းကို မြင်ကြ ရလိမ့်မယ် ။ အဲဒီ လေယာဉ်ကြီးငါးစင်း ရဲ့ ၀မ်းဗိုက်က အက္ခရာငါးလုံးကို ပေါင်းစပ်ဖတ်လိုက်ရင်တော့ ငြိမ်းချမ်း ရေး လို့ အဓိပ္ပါယ် ရတဲ့ PEACE ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကို တွေ့၇လိမ့်မယ် ။ကျွန်တော်ကတော့ အလယ်က လေယာဉ်ကြီး A ကို မောင်းနှင်နေရတဲ့ လေယာဉ်မှုးတစ်ယောက်ပေါ့ ။ အာဖဂန်နစ္စတန် ရဲ့  နယ်နိမိတ်နားကို ချဉ်းကပ်လာပြီဆိုတဲ့ အသိ ပေးသံကို ကျန်လေယာဉ် လေးစင်း လုံးစီ ပို့လိုက်တယ် ။ သူတို့အားလုံးရဲ့  ပြန်သတင်းပို့ချက်တွေ အရ သူတို့ လုပ်ငန်း စဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီ ။ လေယာဉ်တွေရဲ့ အနောက်ဘက် တံခါးဝကြီးကို ဖွင့်ချလိုက်ဖို့ အမိန့်မပေးရသေးပါ စက္ကန့် ပိုင်းအလိုမှာပဲ စီမံက်ိန်းရေးဆွဲသူ ခေါင်းဆောင် ပြောလိုက်တဲ့ စကား တစ်ခွန်းကို နားထဲမှာ ရုတ်တရက် ပြန် ကြားလိုက် မိတယ် ။
``ဒါ ဟာ ရူးနှမ်းတဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုပဲလို့ အပြစ်တင် ဝေဖန်နေကြသူတွေ ရှိနေပေမယ့်လဲ ဒိစိတ်ကူးနဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆောင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ငါကတော့ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်တယ် ´´
ကျွန်တော်လဲ ဒီလိုပဲ ယုံကြည်ချင်ပါတယ် ။ အခြားလေယာဉ်လေးစင်း ဆီကို အမိန့်တစ်ခုလှမ်းပေးလိုက်ခြင်း နဲ့ တပြိုင်နက် တည်းမှာပဲ ကျွန်တော်မောင်းနေတဲ့ လေယာဉ်ကြီး ရဲ့ အနောက်ဘက် တံခါးကြီးကို ဖွင့်ချလိုက်တယ် ။
တစ်ညလုံး မလင်းရလို့ စိတ်ဆိုးနေပုံရတဲ့ နေမင်းကြီးဟာ သူရဲ့ အလင်းတန်းကို တလက်လက်ဖြာရင်း နံနက်ခင်းထဲကို အားမာန်အပြည့်နဲ့ ချဉ်းနင်း ၀င်ေ၇ာက်လာတယ် ။ မြို့တော် ရဲ့  နံနက်ခင်း ဟာ ဒီနေ့တော့ အခိုက်အတန့် အားဖြင့် ယမ်းခိုး ယမ်းငွေ့တွေ ကင်းနေတုံးပါပဲ ။ တစ်နေ့တာအတွက် အခုအချိန်အထိ ဘယ်လို ပေါက်ကွဲ ပစ်ခတ်သံမျိုး မှ မကြား ရသေးတာကို က မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲ မဟုတ်လား ။ ၀တ်ပြုဆုတောင်းသံတွေ သောသောညံနေတဲ့ မြို့တော် တခွင် တပြင်ဟာ တစတစ နဲ့ အသက်ဝင်နိုးထလာတယ် ။ ဆုတောင်းသံတွေကို ဘုရားသခင်ကများ မကြားလေရော့သလား ဒါမှမဟုတ် ဒါဟာ ဘုရားသခင် စွန့်ပစ်ထားတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုလေများ လား ။ တကယ်တမ်းက ငြိမ်းချမ်းချင်လှပါပြီ ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းတွေ ပြည့်သင့် လှပါပြီ ။
ဟိုး အဝေးဆီက နေပျံ့ဝဲလာတဲ့ လေယာဉ်တွေက အသံလှိုင်းတစ်ခု ကို သူတို့ ရဲ့ တမန်တော်အဖြစ် မြို့တော်ဆီ အရောက် ပို့လွှတ်လိုက်ကြတယ် ။ မြို့သူမြို့သား အချို့ လမ်းပေါ်ဆင်းလာကြပြီး မြို့တော် အတွင်းမှာ အတူရှိနေတဲ့ နိုင်ငံ တကာ က နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ရပ်တံ့ငြိမ်သက် ကုန်ကြပြီ ။ သူတို့ အားလုံးရဲ့  ဦးခေါင်းတွေ ကောင်းကင်ဆီကို မော့လာကြပြီး အသံလာရာဆီ ငံ့လင့်ငေးကြည့်နေကြပြီ ။ နေမင်းရဲ့ အလင်းတန်းတွေကို တောင် ထုိးခွဲဖြတ်သန်း ခွင့် မပြုတဲ့ ဒြပ်မဲ့ထုတည် ကြီးတစ်ခုက သူကိုယ်သူ တိမ်တိုက်လို့ အမည်တပ်ပြီး ကောင်းကင်နယ်အချို့ ကိုသိမ်းပိုက် ထားတယ် ။ အသံထွက်လာတာက အဲဒီတိမ်တိုက်ကြီး ရဲ့ ဟိုမှာဘက်ဆီက ……။
ဘယ်လိုအရာကြီးများ အဲဒီတိမ်တိုက်ကြီးရဲ့ ကြားထဲကနေ ဘွားကနဲ ပေါ်လာမလဲဆိုတာကို အားလုံးက စိုးရိမ်စိတ် ကဲ နေတဲ့ သိချင်စိတ်တွေနဲ့ ငေးမျှော် စိုးထိတ်နေကြတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နီးသထက်နီးလာတဲ့ အသံလှိုင်းကို အဓိပါယ် ဖွင့်ဆိုပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့ ဘီ၁၅၀ အမျိုးအစား ဗုံးကျဲလေယာဉ်ကြီးငါးစင်းဟာ တိမ်တိုက်ကြီးကို ထိုးခွဲပြီး ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ဆိုသလို ဘွားကနဲ ပေါ်လာကြတယ် ။
`` အမလေး ´´
စီကနဲညံ့သွားတဲ့ အာမေဋိတ်သံတွေကို အလျင်မလိုကြတဲ့ လူကြီးအချို့ နဲ့ စစ်သားတွေက ရုတ်ရုတ်သဲသဲ မဖြစ်ပွား အောင် လိုက်ထိမ်းနေရတယ် ။ ဟိုဟိုဒီဒီ ဆီ ပြေးဖို့ပြင်နေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေက လေယာဉ်ကြီးငါးစင်းရဲ့ ၀မ်းဗိုက်မှာ ရေးထားတဲ့ PEACE ဆိုတဲ့ စာသားကြောင့် တစ်အောင့်လေး စိတ်သက်သာရသွားကြတယ် ။ ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ပြောတာပဲ ။ သူတို့တွေ သက်သာရာ ရစ စိတ်တွေ နဲ့ သူတို့အပေါ်ကနေ အနည်းငယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ လေယာဉ်ကြီး တွေကို လိုက်ငေးတုန်းမှာ လေယာဉ်ကြိးတွေ ရဲ့ အနောက်ဘက်တံခါးတွေ ပွင့်လာတာကို တွေ့လိုက်ကြတယ် ။ ဒီတစ်ခါ တော့ ဘယ်သူမှ မအော်မိတော့ အောင်ကို အားလုံးမှင်သက် အံသြနေကြ…..
မင်……..သက် ………….အံ့………….သြ ………..နေကြ ။ ခဏအကြာ မှ ကောင်းကင်ရဲ့ မြင်ကွင်းကို ပင့်သက်တွေ တဝေေ၀ နဲ့ မက်မက်မောမော မော့ကြည့်နေကြတဲ့ သူတို့အားလုံး ရဲ့ ဆီကနေ အသံတစ်သံ လျှံထွက်ကျလာတယ် ။
`` အိုး ………ဘုရားသခင်´´
ကျွန်တော် အခု ကဘူးလ်မြို့တော်ကနေ ပြန်လှည့်လာခဲ့ပြီ ။ လုပ်စရာရှိတဲ့ တာဝန်တစ်ခုကို လဲ အကျေပြွန်ဆုံး ထမ်းရွက် နိုင်ခဲ့ ပြီးပြီ သယ်လာတဲ့ဝန်တွေကို ကျဲချလိုက်ရလို့ ပေါ့ပါးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ ရင်ထဲက ကျေနပ်မှု့ပီတီ တွေ နဲ့ ပြည့်ကျပ်ဆို့နင့်လို့ ။ ကျွန်တော်ရဲ့ မျက်ဝန်းနှစ်ဖက်မှာ မျက်ရည်တွေ ၀ဲတက်လာတယ် ။ ၀ဲလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကြောင့် ၀ိုးတ၀ါးဖြစ်နေတဲ့ အမြင်အာရုံတွေကြားမှာပဲ ဒီစံမံကိန်းကြီး အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စည်းရုံးလှုံဆော် ခဲ့ကြတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို တစ်ကွက်ခြင်း ပြန်မြင်လာတယ်.. အသံလှိုင်းတွေနဲ့ အတူ……။
``ဗုံးကျဲလေယာဉ်တွေကို ပန်းကျဲလေယာဉ်အဖြစ် ကျွန်တော်အသွင်ပြောင်းပစ်မယ် ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ လူ့ အသက်ကို သေစေနိုင်တဲ့ ဖျက်အားပြင်းဗုံးတွေတင်မသွားပဲ ။ ရိုင်းစိုင်းနေတဲ့ နှလုံးသားတွေကို နှုးညံ့ငြင်သာ သွားစေ နိုင်တဲ့ ပန်းပွင့်တွေ တင်သွားကြမယ် ´´
``ကမ္ဘာပြည်သူ့အပေါင်းတို့ ခင်ဗျား ခင်ဗျားတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ပြောစရာမလိုပဲ ကျွန် တော် တို့ နားလည်နေပါတယ် ။ အကြမ်းဖက်မှု့တွေ ၊ စစ်မက်တွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဒေသတွေကို ငြိမ်းချမ်း စေချင်တယ် ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဆန္ဒမွန်တွေကို ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဆီ နဲ့ ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ သာ သူတို့ဆီ အရောက်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့  မေတ္တာတရားတွေ ပန်းပွင့်လေးတွေက တဆင့် သူတို့ဆီ ကူးစက်ပြီး နှုးညံ့သိမ့်မွေ့ခြင်း တစ်ခုကို သူတို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အခိုင်အမာ ကို ယုံကြည့်နေပါတယ် ။
``ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ရောယှက်သက်ဝင်နေတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး စနက်တံကို မီးရှို့မယ့် လက် တွေ ၊ သေနတ်မောင်းတံကို ကွေးညွှတ်ဆွဲလိုက်မယ့် လက်တွေ တွန့်ဆုတ်တွေဝေ သွားကြပြီး နောက်ဆုံးမှာ လက်ထဲ က လက်နက်တွေကို ပစ်ချ ပန်းပွင့်လေးတွေကို ကောက်ယူမွှေးမြသွားကြမယ့် အဖြစ်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ ယုံယုံ ကြည်ကြည် နဲ့ မျှော်လင့်မိတယ် ။
`` ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးသူတိုင်း ကျွန်တော်တို့ဆိကု ပန်းတစ်ပွင့်ဆီ ပို့ပေးကြပါ ။ခင်ဗျားတို့ပို့လိုက်တဲ့ ပန်းတွေ အပြည့် အသိပ်နဲ့ ဗုံးကြဲလေယာဉ်ကြီးတွေကို ပန်းကြဲလေယာဉ်ကြီးတွေ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာ နေရာ တွေ ဆီကို ကျွန်တော်တို့ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါ့မယ် ´´
``ကမ္ဘာ့ပြည်သူအပေါင်းတို့ခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့ဆီ ပန်းတစ်ပွင့် ပို့ခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင်ယူကြပါ ..´´
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ပန်းစုဆောင်းရာနေရာ တွေ အားလုံးမှာ ပန်းပွင့်တွေ တောင်ပုံ ရာပုံ ဖြစ်လာတယ် ။ ပြည်သူတွေရဲ့  ငြိမ်းချမ်းရေး ဆာလောင်မှု့ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့လိုက်ရတာပါပဲ. ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို အထူးလိုလားနေကြတဲ့ ပြည်သူလူထုတစ်ရ့ပ်လုံး ရဲ့  ဆန္ဒပြင်းအားတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့တွေ ဗုံးကြဲ လေယာဉ် တွေကို ပန်းကြဲ လေယာဉ်ကြီးတွေ အဖြစ် အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ် ။ အခုဆိုရင် စီမံကိန်းရဲ့ ပထမဆုံး ပစ်မှတ် ဖြစ်တဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ကဘူးလ်ပေါ်ကို ပန်းကြဲလေယာဉ်ကြီး ငါးစင်း နဲ့ ပန်းတွေ သွားကြဲ ချနိုင်ခဲ့ပြီ ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့  လူသားဆန်မှု့ ၊ အကြင်နာတရား ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး သ၀ဏ်လွာ ဖြစ်တဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော ရောင်စုံပန်းပွင့်တွေက နှစ် ပေါင်းများစွာကြာရှည် စွဲမြဲခဲ့ကြတဲ့ အမုန်းတရားတွေ ၊ ဒဏ်ရာ တွေကို နှစ်သိမ့် ဖြောင်းဖျနိုင်စွမ်း ရှိပါ့မလား ။ အခြား လူသား တစ်ယောက် ရဲ့ အသက်ကို တန်ဖိုး မထားနိုင် တော့တဲ့ အထိ အာဃာတမှိုင်းတွေ မိနေတဲ့ နှလုံးသားတွေထဲမှာ ငါ့ရဲ့ ပစ်ခတ်မှု ကြောင့် ပန်းတစ်ပွင့် ကြေမွ ပျက်ဆီးသွားခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်မျိုး ရှိနေနိုင်ပါ့မလား သံသယတချို့တ၀က် ဆက်လက် ရှိနေသေးပေမယ့်. ကျွန်တော့် ရဲ့  အိမ် အပြန်လမ်း ကတော့ ကြည်နှုး ကျေနပ်မှု့ပီတိတွေ အပြည့်နဲ့ ကြည်လင်လှပခဲ့ပါပြီ ။
အဲဒီနေ့က ကဘူးလ်မြို့တစ်မြို့လုံး ပန်းတွေနဲ့ ဖုံးသွားတယ် …….
သေနတ်သံတွေ အားလုံး ရှက်ရွံသေးသိမ် သွားနိုင်လောက်ပါတယ်။
*သူငယ်ချင်း ``စစ်ကိုအောင် ၏ အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒအား ရေးဖွဲ့ သည် *
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 11:59 PM